Tag: Fifandraisana | Martech Zone
Mifamadika & Woo Ireo Mpitsabo anao!
Alakamisy 7, 2013 Alatsinainy, Novambra 25, 2013 Douglas Karr
Maro ny tsingerin'ny varotra amin'ny orinasa (B2B) lava sy sarotra. Fandanjana ny fitadidiana ny saina ambony indrindra miaraka amina fanantenana mandra-pahatongan'ny fanapahan-kevitra momba ny fividianana ary tsy ny fametahana azy ireo sy ny fandroahana azy ireo. Izaho dia nijery ny fitaizan'ny olona sasany mitarika tsara tokoa, ary napetrako tao amin'ny bokiko finday ny “Aza mamaly” mba hialana amin'ireo mpivarotra izay tsy. Nilaza ny fikarohana fa mitentina 443 dolara ny famaritana ny vinavina iray raha 596 $ ny fitsidihana ny iray. Nahoana
Nandritra ny volana Jona, ny namako sy ny mpanjifako, Right On Interactive sy TinderBox, dia nanambatra hery hamorona andian-dahatsoratra webinarina mahafinaritra momba ny fomba hitondran'ny fifandraisana ny vola miditra. Right On Interactive, mpanohana ny Martech Zone, manome vahaolana amin'ny automatisation marketing miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fandresena, fihazonana ary ny fitomboan'ny fifandraisana. TinderBox dia rindrambaiko fanoloran-kevitra amin'ny varotra an-tserasera SaaS izay manamora ny famoronana tolo-kevitra momba ny varotra mirindra sy mirindra miaraka amin'ny vinavinanao. Samy manana fahitana mahatalanjona ao